Dil ka dhacay Magaalada Jowhar iyo Dad ka careysan oo Banaanbax dhigay | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Dil ka dhacay Magaalada Jowhar iyo Dad ka careysan oo Banaanbax dhigay
Dil ka dhacay Magaalada Jowhar iyo Dad ka careysan oo Banaanbax dhigay
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda Federaalka ee Haramcad ayaa saakay Nin shacab ah ku dilay xaafadda Buulo-makiino ee Magaalada Jowhar ee Caasimadda Maamulka Hirshabeelle.
Dad ayaa ku warramay in dilka loo geystay Ninka shacabka ahaa uu yimdi, ka gadaal markii Ciidanka Haramcad oo howlgal ka waday Buulo-makiino uu Ninka ka diiday amar ay siiyeen, iyagoona rasaas ay ku dhufteen u geeriyooday.
Ninka ay dileen Ciidanka Booliska ayaa la tilmaamay inuu ahaa qof xoogaa madaxa looga jiray uuna xauunsanayay, waxaana Meydkiisa la geeyay Saldhiga Booliska Magaalada Jowhar.
Intaas kadib ayaa waxaa waddooyinka Magaalada isugu soo baxay dadweyne farabadan oo ka careysan dilka loo geystay Ninka oo kamid ahaa dadka deegaanka, waxaana ay banaanax ka dhigeen waddooyinka Jowhar.
Dadka dhigaayay banaanbaxa ayaa taayaro waaweyn ku gubayay wadada, isla markaana waxaa ay xireen isku socodka gaadiidka, iyagoona sheegay inay ka xun yihiin tallaabada Ciidanka Haramcad ay ku dileen Ninkaas.
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo Jowhar ayaa sheegaya in uu weli hakad ku jiro socodka gaadiidka iyo Ganacsiga meelaha qaar, welina ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay Maamulka Hirshabeelle oo ay uga hadlaan falkaas dhacay.
Maqaal horeDad ku sumoobay hilib ay ku cuneen Degmo ka tirsan Koonfur Galbeed
Maqaal XigaAl-shabaab oo Qarax ku dilay Askar ka tirsan Dowladda oo Mooto saarneyd